Motivation for success :: निर्वाचन आयोगबाट आयो प्रचण्डको भोक निन्दा चैट हुने खबर !
निर्वाचन आयोगबाट आयो प्रचण्डको भोक निन्दा चैट हुने खबर !
काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का लागि अत्यन्त दुःखद खबर प्राप्त भएको छ । चुनाव लड्न आँट नगरिरहेका बेलामा आयोगबाट आएको खबर अध्यक्ष प्रचण्डसहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि झस्काएको छ ।
गठबन्धन नगरी स्थानिय निकायको चुनावको मिति फेर्न कानुन नै परिवर्तन गराउन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेका उनीहरुमाथि आयोगको सुझावपछि झन् ठूलो दबाब परेको हो ।
आउँदो १२ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ भने आउँदो ६ जेठमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कांग्रेसले सरकारले छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले १४ र २० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
तर, तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।